दशैंका १५ दिन : कुन दिनको महत्व कस्तो ? यस्ता छन् धार्मिक तथा साँस्कृतिक पक्षहरु:: Naya Nepal
हिन्दुधर्मसँग सयौं पर्व र संस्कृतिहरु जोडिएर आउँछन् । सबैको आआफ्नै महत्व र विशेषता छन् । यसै मध्ये एक हो दशैं । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको सबैभन्दा ठूलो चार्ड हो यो । दशैं आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म १५ दिन मनाईन्छ । यी १५ दिन सबैको फरक फरक विशेषताहरु छन् । विशेषगरि दशैंसँग हाम्रो मौलिकपक्ष, धार्मिक पक्ष र साँस्कृतिक पक्ष जोडिएर आउँछन् । के छन् त दशैंका भित्री कुरा ? यसपटक हामीले यसलाई खोतल्ने प्रयास गरेका छौं ।कुनै समय दशैं भन्ने बित्तिकै मासु, चिउरा, नयाँ लुगा, रोटेपिङ्ग, लिङ्गेपिङ्ग लगायतको खुब याद आउने गरेको थियो । तर समय धेरै परिवर्तन भइसक्यो । उल्लेखित कुनै पनि विषयका लागि अब दशैं नै पर्खनु पर्दैन तर पनि दशैंको विशेष महत्व छ । महिषासुर राक्षसको बध, श्रीरामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको, दुर्गाले दैत्य चण्ड–मुण्ड तथा शुम्भ–निशुम्भलाई बध गरेको खुसियालीमा दशैं मनाउने गरिएको मान्यता छ ।
दशैंमा जमराको महत्व:
जमरा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको लागि पवित्र मानिन्छ । विशेषगरी हिन्दूहरुको सबभन्दा ठूलो चार्ड दशैंमा जमराले विशेष महत्व पाउँछ । घटस्थापनाका दिन जमरा देवी दुर्गाको नाममा राखिन्छ । नवरात्र भरि पूजा गरेर दशमीको दिन टीकासँगै पहेँला जमरा कानमा वा शिरमा राखेर आशीर्वाद दिने लिने चलन छ । जमरा मकै, गहुँ तथा जौ का दाना उमारेर तयार गरिन्छ । घाम नलाग्ने ठाउँमा उमारिने भएकोले जमरा पहेँला हुन्छन्  । हिजोआज जमरा दशैंसँग मात्र जोडिएर आएको छैन । जमराको व्यवसायीक खेती गरि यसको जुस सेवनले धेरै रोगहरु पनि निको हुने विश्वास गरिन्छ । धेरै मानिसहरु जमरातिर आकर्षित भएको र यसको सेवन नियमित गर्ने गरेको पाइएको छ ।हिजोआज जमरा दशैंसँग मात्र जोडिएर आएको छैन । जमराको व्यवसायीक खेती गरि यसको जुस सेवनले धेरै रोगहरु पनि निको हुने विश्वास गरिन्छ ।
दशैं वा बडा दशैं (दशहरा, विजयादशमी, नवरात्र) पूजा नेपालीहरूको प्रमुख चार्ड मानिन्छ । राष्ट्रिय चार्ड समेत मानिने दशैं हिन्दु धर्मवलम्बीहरूले आश्विन महिनाको शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि नवमी सम्म (नवरात्रभर) शक्तिको आराधना गरी मनाइन्छ । दशौं दिन विहान आफूभन्दा ठूला मान्यजनहरुको हातबाट टीका (प्रसाद ग्रहण गरेर विशेष रुपमा पूर्णिमासम्म, प्रसाद ग्रहणका लागि) मनाउने गरिन्छ । घटस्थापनामा जमरा राखी नवमीसम्म नवरात्र विधिले प्रत्येक दिन फरक देवीहरूको पूजा हुन्छ । प्रतिपदादेखि क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायिनी, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री गरी नवदुर्गाको पूजा गर्दै सप्तशती (चण्डी) पाठ गरी नवदुर्गा र त्रिशक्ती महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाआजा र आराधना गरिन्छ ।हिन्दु संस्कृती वीरताको पूजक अनि सौर्यको उपासक हो । व्यक्ति र समाजको रगतमा वीरता प्रकट होस भन्ने ध्येयले दशैंको उत्सव (पर्व) सुरु भएको हो । दशैंले दश प्रकारका पापहरू (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहङ्कार, आलस्य, हिंसा र चोरी त्याग्ने प्रेरणा दिने विश्वास गरिन्छ ।
दशैं र वनस्पति:
धार्मिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक रूपले दशैंको जति महत्व छ , त्यत्तिकै प्राकृतिक पक्ष पनि प्रबल छ । यस चार्डले मानिसलाई प्रकृतिको नजिक रहेर पूजा आराधना गरी संरक्षण गर्न समेत प्रेरित गर्छ । नेपालका विभिन्न हावापानीमा पाइने वनस्पतिहरूले खाद्धपदार्थको साथैं औषधोपचारमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धतिमा मात्र नभई आधुनिक चिकित्सामा पनि यिनको व्यापक प्रयोग गरिन्छ ।आश्विन शुक्ल प्रतिपदामा प्रत्येक दशैं घरमा घटस्थापना गर्ने र वेदी बनाई जौ छर्ने परम्परा छ । नवरात्रभरी मातृशक्तिको आव्हान, आराधना गर्दै घडा र वेदीमा उम्रेको जमरा विजयादशमीको दिन आफ्ना कुलदेवतालाई अर्पण गर्ने र प्रसादस्वरूप लगाउने गरिन्छ । जौलाई रोगलाई दूर गर्ने, यज्ञयज्ञादिमा उपयोगी, बल र प्राणलाई पुष्ट पार्ने ओजको सम्पादक वस्तुको रुपमा लिइएको छ । आयुर्वेदमा जौको अंकुरबाट गर्न सकिने उपचारहरूको उल्लेख भएको पाइन्छ । आधुनिक चिकित्सा अनुसार पनि विविध रोगको उपचारका लागि जौ र जौका अङ्कुर उपयुक्त रहेको पत्ता लागिसकेको छ ।
नेपाली समाजमा सगुन वा माङ्गलिक वस्तुको रूपमा केराको प्रयोग गरिन्छ । श्राद्धको लागि पनि यो फल नभई हुँदैन । ठूला मांगलिक कार्यमा यज्ञमण्डपमा केराको बोट राख्नै पर्ने मानिन्छ । यसैगरी दशंैको दही चिउरामा पनि ठाउँ अनुसारका केराको प्रयोगले अझ स्वाद थपिन्छ । औषधिको रूपमा केराको महत्व ठूलो छ । काँचो वा पाकेको फल, जरा वा काण्डको रस विभिन्न उपचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।यसैगरी फूलपातीमा प्रयोग हुने अर्को वनस्पति धानको बोटलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानिन्छ । नेपाली समाजमा धानको महत्व ठूलो छ । मानिसको प्राण धान्नको लागि धानबाटै निर्मित चामलको प्रयोग भातको रूपमा गरिन्छ । खाद्यवस्तुको रूपमा मात्र नभई देवकार्य, पितृकार्य एवं यज्ञयज्ञादि धानद्वारा निर्मित चामलकै प्रयोग गरिन्छ । देवताहरूको पूजा गर्ने र विजयादशमीको रातो टीका समेत धानबाट बनेको अक्षताबाट लगाइन्छ ।
यस्तै बेसार विनाको खाद्यपदार्थ रङ्गहीन एवं स्वादविहीन हुने भएपनि यसको प्रयोग औषधोपचारमा समेत गरिन्छ । आँखा दुख्ने, छालाका रोग लगायतका घाउ चोटपटकमा यसको गानोको रसको प्रयोग गरिन्छ । गाउँघरमा रूघाखोकी लाग्दा बेसारपानी पकाएर औषधीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । पहाडदेखि तराईसम्म पाइने सधैं हरियो रहिरहने रूख हो, अशोका । अशोकाको प्रयोग औषधिको रूपमा बोक्रा फूल आदिलाई लिइन्छ । स्त्रीको गर्भाशयको रोग, रक्तविकार आदिमा बोक्राको पाक बनाएर पिउनाले वा फूलको चूर्ण पानीसंँग पिउनाले फाइदा पुग्दछ । शरीरका विभिन्न भागमा वेदना भएमा वा पोलेमा फूल वा बोक्राको लेप लगाउँदा आराम हुन्छ ।वर्षायाममा उम्रिने मसिनो लहरायुक्त जयन्तीको विरूवा अन्य विरूवालाई आधार बनाएर फैलने गर्दछन् । मसिना पात हुने लहरामा साना साना गाढा राता फूलहरू प्रशस्तै फूल्ने गर्दछन् । कालो स–साना वियाँ हुने यसको फलबाट उत्तेजना ल्याउने औषधी बनाइन्छ । यसैगरी जयन्तीको प्रयोगले गलगाँड एवं श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगको लागि समेत फाइदा पुग्दछ ।
दशैंका महत्वपूर्ण दिनहरु : घटस्थापना:
नवरात्रको सातौं दिनलाई फूलपाती भनिन्छ । दशैंमा यो दिनको महत्व अधिक रहेको छ । नवरात्रको सप्तमीका दिन बेलपत्र, धानको गाभा, अनार, अदुवाको बोट, कच्चु, उखु, केरा आदि नौ प्रकारका पल्लवहरू दशैं घरमा भित्र्याउने कार्यलाई फूलपाती भित्र्याउने भनिन्छ । वर्षा ऋतु सकिएर शरद ऋतुको स्वागतका लागि नयाँ पालुवाहरू घरमा भित्र्याउँदा घरभित्र रहने रोग वृद्धिकारक जीवांश (भाइरस, ब्याक्टेरिया) र विभिन्न प्रकारका नकारात्मक कीटाणु र जीवाणुहरू औषधिय पालुवाको प्रभावले घरमा रहन सक्दैनन् । यस दिन राजधानीको टुँडिखेलमा बढाइँ भएपछि फूलपातीस्वरूप केरा, दारिम, धान, हलेदो, माने, कर्चुर, बेल, अशोका र जयन्ती गरि नौ प्रकारका पातहरूलाई पूजा गरि प्रत्येकको नौ का दरले दुर्गापूजा गरेको स्थानमा भित्र्याइन्छ । यी नौ पातमा क्रमशः ब्रह्मायणी, रक्तचण्डिका, लक्ष्मी, दुर्गा, चामुण्डा, कालीका, शिवा, शोकहारिणी र कार्तिकी देवीलाई एक एक गरी आव्हान गरेर सोह्र सामग्रीले पूजिन्छ । साथै यसै दिन गोरखा दरबारको दशैंघरबाट ल्याइएको फूलपाती राजधानी काठमाडौंको जमलमा ल्याई परेड र बढाइँका साथ हनुमानढोका दरवारमा भित्र्याइन्छ ।वर्षा ऋतु सकिएर शरद ऋतुको स्वागतका लागि नयाँ पालुवाहरू घरमा भित्र्याउँदा घरभित्र रहने रोग वृद्धिकारक जीवांश (भाइरस, ब्याक्टेरिया) र विभिन्न प्रकारका नकारात्मक कीटाणु र जीवाणुहरू औषधिय पालुवाको प्रभावले घरमा रहन सक्दैनन् ।
नवरात्रको दशौं दिनलाई विजयादशमी भनिन्छ । कसैले साँझ बितेपछि त कसैले तारा उदाएपछि दुर्गा विसर्जन गर्ने प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् तर विजय नाम गरेको योग नै सबै कार्यका निम्ति सिद्धिदायक हुन्छ । यस सम्बन्धमा श्रीमद्देवी भागवत नवरात्रमा नवरात्र पर्यन्त अहोरात्र व्रत बसी दशमीका दिन शुभसाहितमा भगवान रामचन्द्रले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेकाले यसलाई विजयादशमी भनिएको हो भन्ने कथन छ । यसदिन आफूभन्दा ठूलाका हातबाट टिका तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ । नातासम्बन्ध स्थायी राख्न र आर्शिवाद ग्रहण गर्नका लागि मामाघर, ससुराली लगायत जानेआउनेहरुको निकै भिड हुन्छ । टिका लगाउने चलन ५ दिन सम्म रहन्छ । कतै कतै एकैदिनमा दशैंको टिका सक्याउने गरिएको पनि पाइन्छ ।टिका लगाउने चलन ५ दिन सम्म रहन्छ । कतै कतै एकैदिनमा दशैंको टिका सक्याउने गरिएको पनि पाइन्छ ।
भारतका विभिन्न प्रदेशहरूमा दशैं:
यस वर्ष विगत जस्तो हुँदैन दशैं:
कोरोना भाइरसको विश्व व्यापी प्रभावका कारण यसवर्ष नेपालका सबैजसो चाडपर्वहरु साबिक जसरी मनाउन नपाइने भएको छ ।कोरोना भाइरसको विश्व व्यापी प्रभावका कारण यसवर्ष नेपालका सबैजसो चाडपर्वहरु साबिक जसरी मनाउन नपाइने भएको छ । दशैं, तिहार , छठ लगायतका मूख्य चार्डहरुमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ । सरकारले पनि यस वर्ष जो जहाँ छौं त्यहिं दशैं मनाउँ भनिसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर दैनिकजसो कोरोना संक्रमण दर पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले पनि यसवर्ष विगत जस्तो दशैं नहुने निश्चित भएको हो ।